20 Kununura Munamato Kumisangano yeAnestest | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato 20 Kununura Munamato Kumiririra Midzimu yeAnest
20 Kununura Munamato Kumiririra Midzimu yeAnest
Wese Mwana waMwari akaregererwa kubva pamhando dzose dzekutuka, VaGaratia 3:13. Iwe uri chisikwa chitsva, uye hapana chekubatana newe uye nedzinza remadzitateguru ako zvakare. Mutsara wedzinza rako idzva ndewekudenga. Izvi zvakakosha zvikuru nekuti kubudikidza neruzivo ndiyo nzira chete yaunogona kununurwa, Zvirevo 11: 9. Munamato usina ruzivo inhabvu isina chibereko. Kusvikira iwe waziva chimiro chako chamwari muna Kristu iwe uchaenderera mberi uri wakabirwa Midzimu yemadzitateguru. Nhasi, ndanyora makumi maviri munamato wekununura pamusoro pemidzimu yemadzitateguru.
Ndeipi midzimu yemadzitateguru? Izvi ndezvemadhimoni strongman kubva kunababa vako kana mama vako kana kana maviri, ari kurwisa kufambira mberi kwako muhupenyu. Iyi midzimu iripo mumhuri kubva kuchizvarwa kuenda kune chimwe chinorwisa kufambira mberi kwayo, ichivachengeta vakasungwa nekusingaperi pasi pano. Asi patinoita minamato iyi yekununurwa pamusoro pemweya yemadzitateguru, munhu wese akasimba mumhuri yako achapinda munzira muzita raJesu
Vakauya sei mumhuri? Madhimoni aya akauya mumhuri idzi semhedzisiro yekunamata zvidhori, tsika, zvemashiripiti uye zvivi nezviito zvakaipa zvemadzitateguru edu. Makore mazhinji apfuura madzibaba edu epamberi paakapihwa vanonamata zvidhori, vazhinji vavo vakazvipira ikoko kumhuri kune idzo dhiabhu. Vamwe vanotoita dzimwe tsika uye vaisanganisira ipapo vana mazviri. Miitiro yese yakaipa iyi yaikoka madhimoni mumhuri idzi. Nhau dzakanaka ndedzeku, sezvo isu tichiita munamato uyu wekununura pamusoro pemweya yemadzitateguru, mweya yemadzitateguru ese ichanyangarika kubva kumhuri yako muzita raJesu. Namata munamato uyu nekutenda nhasi uye unamate nguva dzose, ini ndinotaura nhasi kuti wakasununguka kubva kunzira dzese dzeudhimoni muzita raJesu.
2. Ini ndinotema kusunungurwa kwangu kuzere kubva kuhusungwa hwese hwenhaka, muzita raJesu.
3. Ini ndinotema kusunungurwa kwangu kuzere kubva kune dambudziko ripi zvaro rakaiswa muhupenyu hwangu kubva mudumbu, muzita raJesu.
4. Ini ndinotyora uye ndinosunungura kubva patsika dzakaipa dzese dzakagarwa nhaka, muzita raJesu.
5. Ini ndinotyora uye ndinosunungura kubva kunhaka yega yeipi yakagarwa nhaka, muzita raJesu.
6. Ini ndinozvisunungura pachirwere chose chakagarwa nhaka, muzita raJesu.
7. Baba, neropa raJesu gadzirisa chero chakaremara chakaremara mumuviri wangu, muzita raJesu.
8. Muzita raJesu, ndinotyora kutuka chero kwekutadza kubva mudumbu raJesu
9. Ini ndinotyora kutuka kese kwekuremara, kushaya simba uye kurwara mutsara wemhuri yangu muzita raJesu.
10. Mwari wangu ngaasimuke aparadzire mweya yemadzitateguru ese inosunga nhengo dzemhuri yangu muzita raJesu.
11. Ini ndinoraira mweya werufu negehena kusunungura chinobata pahupenyu hwangu, muzita raJesu.
12. Ini ndinoramba mweya yega wega wekuyedza uye yekukanganisa muhupenyu hwangu muzita raJesu.
13. Ini ndinotyora denderedzwa rega rega ramadhimoni muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
14. Ini ndinoraira wachi yega yega yakaipa yemweya kuti iparadzwe neMweya Mutsvene mweya, muzita raJesu.
15. Baba, neropa raJesu ndinogeza ndakachena kwese kwese satanic mucherechedzo wangu muzita raJesu
16. O Ishe, tuma demo rako remoto kune hwaro hwehupenyu hwangu uye uparadze mhodzi dzose dzakaipa muzita raJesu
17. Baba, chengetera moto weMweya Mutsvene kuchenesa rwizi rwangu neropa uye nekuchenesa hurongwa hwangu, muzita raJesu.
18. Ini ndinorega uye ndinobvisa zvakaipa zvese zvemadhimoni, uye ndinosunungura ini nevazukuru vangu kubva kwavari, muzita raJesu.
19. Ini ndinorega uye ndichiputsa kutuka kwakaipa kose, hiripuni nekutora mbichana, uye ndinosunungura ini nevazukuru vangu kubva kwavari, muzita raJesu.
20. Baba, ndinokutendai nekupindura minamato yangu muzita raJesu.
inoteveraMinamato makumi matatu Ekutungamira Mukuita Sarudzo
Chukwubuike Paul Onyemachi Chivabvu 16, 2021 nenguva dza 3:29 pm
Ndatenda neminamato iyi Mwari akuropafadzei, ndapota ndiri munhu akabatwa paminamato iyi ndinoda zvakanyanya rubatsiro rwenyu kubva kuna Mwari mukundinamatira.